Progressive Voice Myanmar » 2019 mid-year report on status of Freedom of Expression in Myanmar
September 2nd, 2019 • Author: Athan • 1 minute read
During the first six months of 2019, more than 250 people from different walks of lives – activists, students, journalists, artists, land-rights activists as well as citizens practicing their online free expression rights faced more than 70 lawsuits charged under different legislations and regulations. Among them, some are in jail waiting for trials without getting bails and some are already sentenced to long-term imprisonment. Besides, the general population in Myanmar encounters wide range of restrictions on their right to freedom of expression, including barring the events/ceremonies, restricting right to assembly and procession, shutting down internet connection, banning access to information and obstructing dissemination of news and information.
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် အခြေအနေ အစီရင်ခံစာ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ ပထမ ၆ လအတွင်းမှာပင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ ကျောင်းသားများ၊ သတင်းသမားများ၊ အနုပညာရှင်များ၊ မိမိ လယ်၊ ယာမြေအရေး အတွက် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေသူများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းတွင် ကိုယ်ပိုင်အမြင် ဝေဖန်ရေးသားသူများ စသည့် အရပ်သားပြည်သူ စုစုပေါင်း ၂၅၀ ဦးနှင့်အထက် သည် ဥပဒေ၊ ပုဒ်မအမျိုးစုံပါဝင်သည့် အမှုတွဲပေါင်း ၇၀ ကျော်ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။ အချို့နစ်နာသူများသည် အာမခံမရရှိဘဲ ထောင်အချုပ်ဖြင့် တရားရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပြီး အချို့အမှုများမှာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ပွဲအခမ်းအနားများ ပိတ်ပင်ခံရခြင်း၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှု ပိတ်ပင် တားမြစ်ခံရခြင်း၊ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရခြင်း၊ သတင်းရယူခွင့် ပိတ်ပင်ခံရခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက် စီးဆင်းဖြန့်ကျက်မှု ကန့်သတ်ခံရခြင်း၊ စသည့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် ချိုးဖောက်ခံရမှု အမြောက်အများကို မြန်မာပြည်သူများ ကြုံတွေ့ခံစားနေရသည်။
Download full report in English and Burmese here.